मेरो मनमा होइन दिमागमा गोबर छ  Sourya Online
मेरो मनमा होइन दिमागमा गोबर छ
सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १४ गते १:५५ मा प्रकाशित
युवा पुस्ताका सशक्त कविमध्ये पर्छन्, स्व. स्वप्निल स्मृति । पाँचथर स्याब्रुम्बामा जन्मिएका सनमान चेम्जोङ नै साहित्यिक जगत्मा स्व. स्वप्निल स्मृतिका नामबाट चिनिन्छन् । राजधानीलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका उनी कवितामा प्रयुक्त रंगवादका अभियन्तामध्ये पर्छन् । ‘रंगैरंगको भीर’
(२०६१) र ‘बाडुली र सुदूर सम्झना’ (२०६८) गरी दुई कवितासंग्रह बजारमा ल्याइसकेका स्वप्निल ‘कलम’सँग यसरी पोखिए :
भनिन्छ, रंगवादीहरू सर्वसाधारणले नबुझ्ने कवि हुन् । कुरा साँचो हो ?
बेलाबेला गुनासोहरू आउँछन् । तर, तपाईंले भन्नुभएको ‘सर्वसाधारण’बाट होइन, बरू स्वघोषित बौद्धिक भनाउँदाहरूबाट । नेपाली कविताको ठेक्का लिएजस्तो गर्ने जो छन् नि उनीहरूबाट † कविता यस्तो हुनुपर्छ भनेर व्याकरण बनाएर बस्ने जो जमात छ, रंगवादले उनीहरूको व्याकरणलाई भताभुंग बनाइदियो नि त…।
तपाईंका कवितामा शब्द–अर्थको पारपाचुके हुने भएकाले ध्वनि र संकेतका भरमा तिनलाई बुझ्नुपर्ने बाध्यतामा पाठकहरू पुग्छन् नि ?
सबैभन्दा पहिले त ‘शब्द अर्थ’ भन्नु नै ध्वनि र संकेत हो । तपाईं ‘रूख’ भन्नुहुन्छ, ध्वनि हो, अक्षरमा लेख्नुहुन्छ संकेत हो । ‘रूख’ भन्दा नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्नका रूपमा पनि बुझ्नुहुन्छ भने त्यो अलिअलि कविता हो । शब्द कवितामा पुगेपछि नयाँ र विस्तारित ‘अर्थ’ लिएर बस्छ । त्यतिखेर बुझिएन भन्नेलाई त मतपत्रको रूख चिह्न नै देखाउनुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, सबै पाठकहरू त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा नहोलान् । अर्को कुरा कलाका दृष्टिले कवितामा ध्वनि या संकेतको प्रयोग गर्नु नराम्रो होइन ।
मिथकहरूको भरमार प्रयोग र बहुल अर्थ दिने शब्दको भिडमा तपाईंका कविता रुमल्लिएजस्तो लाग्दैन ?
मेरा कवितामा कसैले ‘मिथकको भरमार प्रयोग भयो’ भन्छ भने म उसको मस्तिष्क नै मिथक भइसकेको ठान्छु । किनभने म ठीक–ठीक ठाउँमा आवश्यकताअनुसार मात्र मिथलाई खेलाउँछु । मिथ खेलाउनु एकदम जोखिम छ । बहुलअर्थी शब्दको जवाफ त अघि नै आइसकेको छ ।
तपाईंको किताब ‘रंगैरंगको भीर’, धर्मेन्द्रविक्रम नेम्बाङको ‘भीरैभीरको रंग’ र चन्द्रवीर तुम्बापोको ‘भीरैभीर रंगैरंग’को नाम मिल्न खोज्नु संयोग हो वा यो पनि रंगवादीहरूको नौलो प्रयोग ?
संयोग त कसरी भनौँ ? जानीजानी नै गरेको हो । नौलो प्रयोगको दाबी पनि नगरिहालूँ, प्रयोग मात्रले पनि काम चलिहाल्छ । यो ‘बायोनरी अपोजिसन’को कुरा हो ।
नेपाली साहित्यको पछिल्लो प्रवृत्ति कस्तो छ ?
नेपालीका मस्तिष्कमा अहिले आ–आफ्नै मिथ खेल्न थालेका छन् । आ–आफ्ना आदिम पुर्खा, यहाँको प्रकृतिसितको आदिमसम्बन्ध र अपनत्वलाई खोतल्न थालेका छन् । त्यसको जगमा उनीहरू समृद्ध नेपालको सपना देखिरहेका छन् । त्यसको राजनीतिक प्रकटीकरण हो– संघीयता । यसमा आत्मसम्मान र परिचय जोडिएका छन् । अहिले नेपाली समाज अभूतपूर्व रूपले सल्बलाएको छ । मेरो कल्पना हो, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा अरू राज्यमाथि लडाइँ थोपर्दा मात्र सायद यस्तरी नेपाली समाज हल्लिएको थियो । भन्नुको मतलब नेपाली समाज अहिलेचाहिँ भावानात्मक एकीकरणको बाटोमा छ । अबको नेपाली साहित्य मोडिनुपर्ने पनि त्यतै हो, स्टेयरिङ घुमिरहेको जस्तो छ ।
कविताको स्तर खस्किएजस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन । बरु बढिरहेको देख्छु । यहाँका विविधता, यहाँका इन्द्रेणी, संस्कृतिको सौन्दर्य बल्ल नेपाली साहित्यले प्राप्त गर्न थालेको छ । यसले नेपाली साहित्यको स्तर र चरित्रलाई उजिल्याउनेछ ।
भूपी शेरचनपछि नेपाली कविता मूच्र्छा परेको भनाइ सत्य हो कि होइन ?
वास्तवमै भूपि शेरचन महान् कवि हुन् । एउटा कुरा मान्नुपर्छ, बिदा भइसकेका महान् मानिसहरूलाई जित्ने अर्को महान् मानिस कहिल्यै जन्मिँदैन । र, यो पनि मान्नुपर्छ, उनीहरूको बिदाइपछि पनि सृष्टिले सास फेरिरहन्छ । मूच्र्छै परेको म मान्दिनँ ।
तपाईंको कवितासंग्रह ‘बाडुली र सुदूर सम्झना’ नश्लीय उग्रचेतनाको उपज हो भन्ने धेरै छन् नि ?
हा हा हा…, यो जहाँ पनि मलाई सोधिने अनिवार्य प्रश्नजस्तै भइसक्यो । यो प्रश्नको उत्तर तपार्इंले नै दिनुपर्‍यो भने तपाईंको उत्तर हुनेछ– आरोप मात्र हो, त्यस्तो छैन ।
तपाईंको मनमा सुगन्ध मात्र होइन, गोबर पनि होला । तर, कवितामा निकै इमानदार देखिनुहुन्छ । यो हिप्पोक्रेसी होइन ?
मनमा होइन, दिमागमा गोबर छ । आफैँ अन्दाज लगाउनुहोस्, कति गोबर हुँ, ‘हिप्पोक्रेसी’ भन्ने नै बुझिनँ । त्यही भएर कवितामा इमानदार भएको हुँला ।
तपाईं कुन दर्जाको लेखक ?
आफँैलाई कसरी दर्जा दिऊँ ? खगेन्द्र संग्रौला दाजु र राजेन्द्र थापालाई थाहा होला कि †
तपाईं कुन गुटको लेखक ?
जो राम्रो लेख्छ त्यही गुटको हो ।
कस्ता कविता मन पर्छन् ?
विचार र कला दुवै दृष्टिले अब्बल ।
कविता लेख्न अध्ययन बढी सहायक हुन्छ कि अनुभूति ?
विनाअध्ययन अनुभूतिको पृष्ठभूमि बन्दैन । ह्युगो चाभेजलाई गहिरोसँग नपढी उनको निधनलाई गहिरोसँग अनुभूत गर्न सकिँदैन ।
पाँच उत्कृष्ट कविता र कविका नाम ?
सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न हो यो । गोपालप्रसाद रिमालको ‘आमाको सपना,’ भूपी शेरचनको ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे,’ बैरागी काइँलाको ‘मातेको मान्छेको भाषण…’, श्रवण मुकारुङको ‘बिसे नगर्चीको बयान’ र पारिजातको ‘जुठी दमिनीको अभिव्यक्ति’ । तर, म पारिजातलाई कविभन्दा उपन्यासकारकै रूपमा बढी मान्छु ।
कविको मापन उसको कविताको स्तरले गर्छ कि नामपछाडि (तपाईंको सवालमा अगाडि) झुन्डिएको टाइटलले ?
यसको उत्तर पाठकहरूलाई नै छोडिदिऊँ ।
तपाईंलाई कहिलेकहीँ आफैँसँग लाज अथवा घिन लाग्दैन ?
लाग्छ । जस्तो कि यसरी अन्तर्वार्ता दिइरहँदा मलाई लाज लाग्छ । पछि अन्तर्वार्तासँगै कहीँ नभएको म अनुहार न दनुहारको तस्बिरसमेत छापिएर आउँदा घिन लाग्छ ।
‘ब्राह्मण स्त्री देख्नासाथ म उत्तेजित हुन्छु’ भन्नुभयो । के जनजाति स्त्री कामुक हुँदैनन् ?
‘ब्राह्मण स्त्री देख्नासाथ म उत्तेजित हुन्छु,’ यसरी भनेको छैन, प्रेम गर्छु भनेको छु । पुस महिनाको गरिमा मासिक हेर्न सक्नुहुन्छ । नयाँ/नौलो/नवीन स्तम्भमा ममाथि फिचर बनाउनुहुने राजकुमार बानियाँजी हो । सम्पादक अविनाश श्रेष्ठ दाइ † हुँदै नभएको कुरालाई केही वाहियात कविहरूले अविनाश दाइमाथि षड्यन्त्र रच्न हतियार बनाएका मात्र हुन् । मलाई अलिक दुब्लो पातलो देखेर त्यसो गरेका होलान् । तर, म कमजोर कवि होइन ।
प्रस्तुति : दीपक सापकोटा
भगवान् राम नेपालमै जन्मेका आठ प्रमाण
राप्रपाहरूको पहिचान पेचिलो बन्दै
दलित महिला बलात्कारको घटना सार्वजनिक
‘ए’ डिभिजन लिगः मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब विजयी
पार्टी कार्यालयमा विद्यार्थीको घेरामा परे देउवा
विश्व बैंककोे प्रतिवेदनप्रति सरकारको आपत्ति
डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना दुईको मृत्यु
चार करोडका १९ वटा योजना छनोट
कुटपिटबाट ३२ बर्षीय युवकको मृत्यु